6 Mitambo uye Zvishandiso Mahara kune Yakatemwa Nguva (Ndira 31) | IPhone nhau
Isu tave kuda kupedzisa mwedzi wekutanga wa2017. Mumazuva makumi matatu chete, akawanda esarudzo dzeGore Idzva akatosiyiwa kune trunk yezviyeuchidzo, izvo, mumwedzi gumi nerimwe, zvichazopukurwa guruva zvakare. Zvisinei, chinangwa chedu kukuunza zvinopihwa uye zvinoderedzwa kuti uwane mahara mitambo uye kunyorera zvinoramba. Mangwanani ano ndakatarisa kuApp Store uye izvi ndizvo zvandakawana.
Mahara mashandisiro ekutora mifananidzo, kugadzirwa, kusimudzira yedu yemuviri fomu kana mumwe mutambo kuti upfuure iyo nguva. Iyi inotevera runyorwa rwemahara emitambo uye kunyorera kunounza zvishoma zvezvose, uye nezvese zvido. Asi kana pasina chaunoona chichikufadza, yeuka kutishanyira nguva nenguva nekuti izvo zvinopihwa zvinochinja mazuva ese.
1 Remote Control, Keyboard uye Trackpad yeMac [PRO]
2 Stationery - Dhizaina Glitter uye Monogram meme yeCrafty Preppy DIY Musikana
3 PDF zvese izvi: PDF Printer uye Shanduri pane iyo kuenda
5 Workout (7 Minute Muviri Fitness Exercise)
6 Z Gamba
Dai ndaive iwe, ndaizomira kuverenga panguva ino chaiyo uye ndaisazopedza sekondi kuti ndisununguke nechishandiso ichi, «Remote Control, Keyboard uye Trackpad yeMac [PRO]».
Ichi chinhu chinobatsira kwazvo, kunyanya kana usiri pamba, unofanirwa kushanda neMacbook yako uye hauna Magic Mouse iripedyo, nekuti "Pakarepo unoshandura yako iPhone nePadad kuita kure kure kune Mac yako".
Neapp iyi iwe unenge uine trackpad uye yekunze keyboard chero paunenge uchizvida uye iwe unogona zvakare kudzora vhoriyamu pane yako Mac, kutamba paSpotify, iTunes, nezvimwe, kuvhura nekuvhara maapplication uye zvimwe zvakawanda.
Kushandisa Remote kuzvidzora Iwe unongoda chero Mac komputa inomhanya macOS 10.7 kana kupfuura, uye iyo "Mubatsiri" application yakaiswa pairi, iyo iwe yaunogona zvakare kuwana mahara pano, kana nekutevera rairo mukati mekushandisa.
Remote Control, Keyboard uye Trackpad yeMac [PRO] ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros (iyo yatove yakanaka kwazvo pamabatiro ayo uye nekuita kwakanaka kwayinoita), asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Stationery - Dhizaina Glitter uye Monogram meme yeCrafty Preppy DIY Musikana
Regedza chisikwa chiri iwe chaunotakura mukati neichi mifananidzo yekugadzirisa uye kugadzirisa zvakare app yauchazopa nayo mifananidzo yako kutaridzika kwakasarudzika.
Mutengo wakajairika wepurogiramu iyi ndi0,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
PDF zvese izvi: PDF Printer uye Shanduri pane iyo kuenda
«PDF iyo Zvese chishandiso chekushandura uye kugovana mafaera ePDF. Chinja Shoko, Excel, zvinyorwa zvePowerpoint, mapeji eWebhu, vanobata, mameseji, tsamba. Zvese izvi mumasekondi, kugadzira nyanzvi PDF. »
PDF zvese Iyo ine mutengo wenguva dzose we3,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana yemahara zvachose kwenguva pfupi.
Monogram iko kunyorera kwaungagone gadzira tsika mapikichas ye iPhone yako kana iPad nenzira inokurumidza uye yakapusa.
Monogram Iyo ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana yemahara zvachose kwenguva pfupi.
Workout (7 Minute Muviri Fitness Exercise)
Maminetsi manomwe ekurovedza muviri zuva nezuva anokwana pinda tune zhizha. Asi chenjera, zvinogona kunge zvisiri nyore sezvaunenge uchifungidzira. Kugara, kutsungirira kwakawanda ndizvo zvauchazoda.
Ita kuti zviite Iyo ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana yemahara zvachose kwenguva pfupi.
Uye zvechokwadi, isu hatina kukwanisa kupedzisa tisina kusanganisira mutambo Pakati pemahara maficha ezuva, akapusa asi akapindwa muropa. Unozviedza here?
Z Gamba Iyo ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana yemahara zvachose kwenguva pfupi.
CHERECHEDZO CHINOKOSHA: yeuka kuti zvese zvakapfuura zvinopihwa zviri Nguva Yakatemwa. Chinhu chega chandinogona kukuvimbisa ndechekuti kukwidziridzwa kuri kushanda panguva yekutsikisa ichi posvo, zvisinei, hatizive kuti zvichaguma riini. Izvi zvinokonzerwa nechikonzero chiri nyore kwazvo: ivo vanogadzira havazivise zuva rekuguma kwechipo, saka hatigone kuziva. Naizvozvo, uye sezvandinowanzo taura, "tanga utore, wobva wafunga." Yakazara, ndeye mahara 😉.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 6 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 31)
Iyo Yalu Jailbreak yeIOS 10.2 inogadziriswazve uye ikozvino inowirirana neiyo iPad Air 2 uye iPad Mini 4